Arzantina: Manova Ny Manodidina Amin’ny Alalan’ny “Hangara” Ara-Kolontsaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2012 4:11 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Italiano, Español, Aymara, Ελληνικά, English
Eo an-dalam-panovana ny manodidina azy amin'ny alalan'ny kolontsaina, zavakanto ary ny fitaovana fampitan'olo-tsotra vaovao ny “Hangara”n-kolontsaina Piedrabuenarte miorina amin'ny tanàna manamorona an'i Buenos Aires, Arzantina. Trano malalaka fitehirizan'entana fandravahana amin'ny tantara tsangana [teatra] sy loko tsy ilaina intsony ity novain'ny mpanakanto ao amin'ny fokonolona ity ho ivontoeran'ny zavakanto. Ao amin'ny fantsona YouTube no iresadresahan-dry zareo momba azy ity.
Eddie Avila, ao amin'ny lahatsoratra Rising Voices tamin'ny 2011, no nanamarika toy izao nialoha ny fitafatafana tamin'ny mpanorina:
Misy ny drafitra hiarahana miasa akaiky amin'ny tanora manodidina, amin'ny fomba ahafahan-dry zareo mampiasa ny fakantsary ao amin'ny findainy sy ny fanomezana anjara biriky amin'ny fampiroboroboana ny fantsona YouTube. Hampisokatra sehatra [faravodilanitra?] hafa vaovao amin'ireo faritra manodidina an'i Piedrabuena izany. Ao amin'ity lahatsary manaraka ity no iresadresahan'ny mpikambana mpanorina 2 ny hangara, Juan “Pepi” Garachico sy Lucian Garramuño, ny dikan'ny Hangara eo amin'ny mponina sy ny fomba fampiasan-dry zareo ny fitaovana fampitam-baovao hiresadresahana ny tantaran'i Piedrabuena.
Ka inona ny efa nataony? ao amin'ny fantsona YouTube, Piedrabuenartv no ahitantsika ny ranty ara-javakanto fanao isan'andro ao amin'ny Hangaran-kolontsaina sy ny fahafaha-mamoaka talenta ho an'ny fiaraha-monina amin'ny alalan'ny lahatsary. Ny lahatsary manaraka mampiseho ny fiovan'ilay tokotany malalaka tsy misy na inona na inona ho lasa tanànan-kolontsaina, izay fonenanana vaovaon'ny fitaovam-pilalaovana, sy andalam-pananganana ny toerana fanaovana tantara tsangana ankalamanjana, ary hodidinina trano avo onenan'ny fokonolona izany rehetra izany.
Fizarana hafa manasongadina ny zavatra antenain'ny manodidina momba ity fiovàna ara-kolontsaina ity, na tahaka ity iray ity, jery tamberina fony vao nanala ny biriky nandrindrina ny varavarankely ry zareo telopolo taona taorian'ny nanakatonana azy ireo.